Empiran'i Aksoma - Wikipedia
Ny Empiran'i Aksoma na Fanjakan'i Aksoma dia fanjakana natanjaka tao amin'ny Tandrok'i Afrika ao avaratr'i Etiôpia sy Jiboty ary Eritrea. Nandroso manodidina ny natanànan'i Aksoma izany fanjakana izany nanomboka tamin'ny taonjato faha-4 ka nahatratra ny fara tampon'ny tanjany tamin'ny taobjato voalohany hatramin'ny taonjato faha-6. Niorina teo amin'ny fihaonan'ny lalan'ny raharaham-barotra nampifandray an'i India syny tontolo mediteraneana ny Fanjakan'i Aksoma ka lasa mpandray anjara lehibe teo amin'ny raharaham-barotra teo amin'ny Empira rômana sy i India fahiny. Ny manam-pahefana aksomita dia nanamora ny raharaham-barotra tamin'ny fanefeny ny volany manokana nanomboka tamin'ny taonjato faha-3, ka nametraka ny fanjakazakany teo amin'ny Fanjakan'i Kosy izay nanomboka nihareraka.
Ny Empiran'i Aksoma koa dia niditra an-tsehatra tamin'ny raharaha ara-pôlitikan'ireo fanjakana tao amin'ny Saikanosin'i Arabia ka taty aoriana dia nanitatra ny fanapahany tamin'i Arabia atsimo taorian'ny fahazoana an'i Himyar tamin'ny andron'ny mpanjaka Ella Asbeha. Rehefa nahatratra ny fara tampon'ny heriny ny Fanjakan'i Aksoma dia niitatra tamin'ny ankabeazan'ny faritr'i Eritrea ankehitriny, tamin'ny faritra atsimo ao Etiôpia, tamin'i Jiboty, tamin'i Sômalia, tamin'ny ampahany amin'i Sodàna sy i Egipta ary i Arabia Saodita, ary nolazain'ny mpaminany persàna atao hoe Manika (izay maty tamin'ny taona 274 taor. J.K.) fa iray amin'ireo firenena lehibe indrindra efatra tamin'ny fotoanandrony, ankoatr'i Persia sy i Rôma ary i Sina.
Tamin'ny taona 330, tamin'ny fanapahan'i Ezana any Aksoma (320-360), ny Empiran'i Aksoma no voalohany nandray ny fivavahana kristiana ho fivavaham-panjakana ka namarana ny fanenjehana ireo fianakaviambe jodeo-krostiana izay betsaka tao. Tamin'ny taona 380 anefa ny Empira rômana vao nadray ho fvavaham-panjakana ny kristianisma araka ny Didy tao Tesalonika.
Tamin'ny taonjato faha-7 dia tonga nialokaloka tao ireo mpino silamo voalohany avy any Maka izay nandositra ny fanenjehan'ireo Koraisita; ny fisesen-tany nahazo ireo mpianatr'i Mohamady voalohany toa an'i Djafar ibn Abi Talib, dia raisin'ny lovantsofina silamo ho ny Hijra ("fifindra-monina") voalohany. Izany fandraisana izany no fototry ny fifandraisana maharitra tsy misy raorao teo amin'ny fanjakana kristianan'i Etiôpia sy ireo fanjakana miozolmàna manodidina sy manakaiky azy.
Ny Aksomita dia nanorina tsangambato lehibe maro. Araka ny lovantsofina dia toerana nipetrahan'ny Fiaran'ny Fanekena sy ny tranon'ny mpanjakavavin'i Sabà i Aksoma.
Efa hatramin'ny taonjato faha-4 ny Fanjakan'i Aksoma no nampiasa ny anarana hoe Etiôpia izay nanondro an'i Afrika tamin'ny jeografian'ny Andro Taloha, ka ny hoe Afrika tamin'izany dia tsy nanondro afa-tsy io Tonizia ankehitriny io.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Empiran%27i_Aksoma&oldid=1000070"
Dernière modification le 8 Janoary 2021, à 10:38
Voaova farany tamin'ny 8 Janoary 2021 amin'ny 10:38 ity pejy ity.